musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kodzero Dzevanhu » Mhuri Dzinonyangarika muSri Lanka: Canada yakanga yakwana
Kuputsa Kufamba Nhau • Canada Breaking News • wedzero • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • Sri Lanka Kuputsa Nhau • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
canada gurukota rezvekunze marc ga
Gurukota reCanada rekune dzimwe nyika Marc Garneau
"Tinokukurudzirai chikumbiro ichi mushure mekurasa tarisiro yekuwana ruramisiro kuhama dzedu dzatsakatika kusanganisira vedu vacheche vakashaika nevana"
Michelle Bachelet, UN Commissioner weHuman Rights, akakurudzira UN Human Rights Council Member States kuti vatore matanho ekuendesa Sri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC). ”
Mutsamba yakanyorerwa Gurukota rezvekunze kuCanada VaMarc Garneau, Mhuri dzeVakanyangarika vakamukurudzira kuti aendese Sri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC).
Canada iri kutora chinzvimbo chehutungamiriri muSri Lanka pachirongwa chinouya che46th cheUN Human Rights Council Session kuGeneva munaKukadzi / Kurume 2021.
Munguva pfupi yapfuura, Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner weHuman Rights (OHCHR) muReport yake yemusi wa12 Ndira 2021 akakurudzira UN Human Rights Council Nhengo dzeNyika kutora matanho ekuendesa mamiriro ezvinhu muSri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC) .
“Sezvo uri nhengo yeSri Lanka Core-Group kuUN Human Rights Council, isu vanobva kumhuri dzevakanyangarika tiri kunyora pamberi pemusangano wechimakumi mana nenhanhatu weKanzuru, kukumbira neruremekedzo kuti ubatanidze chisarudzo chako muSri Lanka. , Kuendesa Sri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC) ”yakadaro tsamba.
“Tinokukurudzirai pachikumbiro ichi mushure mekurasa tarisiro yekuti hama dzedu dzakashaika dzisanganisira vacheche vedu nevana vakashaika. Sezvamunoziva, UN Working Group on Enforced Disappearances yakataura kuti yechipiri nhamba yepamusoro yezviitiko zvekutsakatika zvakamanikidzwa pasi rose zvinobva kuSri Lanka ”yakaenderera mberi tsamba.
Tsamba iyi yakaratidza nhoroondo yevimbiso dzenhema dzakateerana neSri Lankan Hurumende uye neMberi pane Mhosva Dzepasi Pose Dzakaitwa muSri Lanka.
HERE IZVI ZVIMWE ZVAKAITIKA:
1) Zvinoenderana neKubvumbi 2011 Gwaro reMunyori Mukuru weUN Panel reVanoona nezve Kuzvidavirira muSri Lanka akataura kuti paive nekupomerwa kwechokwadi kwekuti mhosva dzehondo uye mhosva dzakanangana nevanhu dzakaitwa mukati mematanho ekupedzisira ehondo yehondo pakati
Hurumende yeSri Lanka neRusununguko Tigers yeTamil Eelam, uye kwaigona kuve kwakave nevanhu vanosvika zviuru makumi mana zvekufa kwevanhu vechiTamil mumwedzi mitanhatu yekupedzisira.
2) Sekureva kwaNovember 2012 Mushumo weUN Secretary-General weInternal Ongororo Panel pamusoro peUN Action muSri Lanka, vanhu vanopfuura makumi manomwe havana kuzivikanwa panguva yechikamu chekupedzisira chehondo muna70,000.
3) Vanoverengeka vakaurayiwa apo mauto eSri Lankan akarova bhomba nekupfura nzvimbo yakasarudzwa neHurumende seNo Fire Zones (Nzvimbo dzakachengeteka). Kunyange zvipatara nenzvimbo dzinogovera chikafu dzakabhombwa. Vanoverengeka vakafawo nenzara uye vakadeura ropa kurufu nekuda kwekushaikwa kwekurapwa.
4) International Chokwadi uye Ruramisiro Chirongwa (ITJP) muna Kukadzi 2017 yakapa ruzivo kuUN yeSri Lankan Mauto anomhanya "Rape Camps", uko vakadzi veTamil vari kubatwa se "varanda vebonde."
5) Sekureva kweUK Kunze kwenyika uye Commonwealth Hofisi mushumo muna Kubvumbi 2013, kune vanopfuura 90,000 Tamil chirikadzi zvehondo muSri Lanka.
6) Zviuru zveTamil zvakanyangarika kusanganisira vacheche nevana. UN Working Group on Enforced Disappearances yakataura kuti yechipiri nhamba yepamusoro yezviitiko zvekunyangarika zvakamanikidzwa pasi rose zvinobva kuSri Lanka.
PASI PASI, FUNGA TSVAKA Tsamba:
Anodiwa Anokudzwa Gurukota rezvekunze,
Re: Kukwidza kuisa muchigadziriswa muSri Lanka kuendesa Sri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC).
Sezvo iwe uri nhengo yeSri Lanka Core-Boka kuUN Human Rights Council, isu kubva kumhuri dzeakanyangarika tiri kunyora pamberi pechikamu che46th cheKanzuru, kukumbira neruremekedzo kuti ubatanidze muSri Lanka Resolution yako, Kuendesa Sri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC).
Sezvauri kuziva, Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner weHuman Rights (OHCHR) muReport yake yemusi wa12 Ndira 2021 akakurudzira UN Human Rights Council Nhengo dzeNyika kutora matanho ekuendesa mamiriro ezvinhu muSri Lanka kuInternational Criminal Court. (ICC).
Isu tinonyatsokukurudzira ichi chikumbiro mushure mekurasa tarisiro chero yekuwana ruramisiro kuhama dzedu dzakanyangarika kusanganisira vedu vakashaika vacheche nevana. Sezvauri kuziva, UN Working Group on Enforced Disappearances yakataura kuti yechipiri yepamusoro nhamba yeanomanikidzwa kutsakatika kwezviitiko zvepasi anobva kuSri Lanka.
NHOROONDO YENYAYA DZENHEMA NEVANHU VEMAHARA SRI LANKAN:
Isu tinodawo kuunza kwauri kuti akateedzana maSri Lankan Hurumende dzakundikana kuita chero eUNHRC Resolutions, kusanganisira iwo avakazvipira kutsigira.
Hurumende yapfuura haina kungokundikana kutora matanho ane musoro ekushandisa Sarudzo iyo yavakatsigira, zvinopesana neMutungamiri, Mutungamiriri uye nhengo dzeHurumende vakataura kakawanda uye zvine mutsindo kuti havasi kuzadzisa Sarudzo dzeUNHRC.
Hurumende nyowani yazvino yakaenda nhanho imwe ichibva yasiya zviri pamutemo kubatanidzwa kweiyo Resolutions 30/1, 34/1 uye 40/1 uye ikasiya nzira yekuzvidavirira yeUNHRC.
Zvakare, sekutsvaira UNHRC, musoja chete akamborangwa akatongerwa rufu nekuda kwekuuraya vanhuwo zvavo kusanganisira vana akaregererwa neMutungamiriri wazvino.
Zvakare, vakuru vakuru vanoverengeka vemauto vakapomedzerwa mhosva yekupara mhosva dzehondo vakakwidziridzwa uye vakabatwa se "magamba ehondo." Mumwe mukuru akapihwa zita muUN anoshuma semunhu anofungidzirwa kuti tsotsi rehondo akasimudzirwa seMutungamiriri wenyika.
ZVAKAPEREKA PAMHOSVA DZENYIKA DZOSE DZINOPERWA MU SRI LANKA:
Sekureva kwaKurume 2011 Mushumo weUN Secretary General General Panel reVanoona nezve Kuzvidavirira muSri Lanka akataura kuti paive nekupomerwa kwechokwadi kwekuti mhosva dzehondo uye mhosva dzakanangana nevanhu dzakaitwa panguva dzekupedzisira dzehondo yekurwa pakati
Sekureva kwaNovember 2012 Chirevo cheMunyori-Mukuru weUN weInternal Review Panel paUN Action muSri Lanka, vanhu vanopfuura makumi manomwe havana kuzivikanwa panguva yechikamu chekupedzisira chehondo muna70,000.
Vanoverengeka vakaurayiwa apo mauto eSri Lankan akaramba achirova bhomba nekupfura nzvimbo yakasarudzwa neHurumende seNo Fire Zones (Nzvimbo dzakachengeteka). Kunyange zvipatara nenzvimbo dzinogovera chikafu dzakabhombwa. Vanoverengeka vakafawo nenzara uye vakadeura ropa kurufu nekuda kwekushaikwa kwekurapwa.
International Chokwadi uye Ruramisiro Project (ITJP) muna Kukadzi 2017 yakapa ruzivo kuUN yeSri Lankan Mauto anomhanya "Rape Camps", uko vakadzi veTamil vari kubatwa se "varanda vebonde."
Sekureva kweUK Kunze kwenyika uye Commonwealth Hofisi mushumo muna Kubvumbi 2013, kune dzinopfuura makumi mapfumbamwe emakumi mashanu echirikadzi dzehondo dzeTamil muSri Lanka.
Zviuru zveTamil zvakanyangarika kusanganisira vacheche nevana. UN Working Group on Enforced Disappearances yakataura kuti yechipiri nhamba yepamusoro yezviitiko zvekunyangarika zvakamanikidzwa pasi rose zvinobva kuSri Lanka.
Takakurudzira zvakare neruremekedzo kuti ubatanidze muchiSarudzo kuSri Lanka Kutumira kuSri Lanka kuInternational Criminal Court (ICC).
Sangano reHama dzeKusimudzirwa Kuparara muDunhu reKumaodzanyemba neEast yeSri Lanka.
Yakagadzirwa nevatungamiriri vedunhu:
1) T. Selvarani - Dunhu reAmpara.
2) A. Amalanayaki - Dunhu reBatticaloa.
3) C. Illoankothai - Dunhu reJaffna.
5) M. Chandra - Mannar Dunhu.
6) M. Easwari - Dunhu reMullaitivu.
7) S. Davi - Dunhu reTrincomalee.
8) S. Saroyini - Dunhu reVavunia.
Bata: A. Leeladevi - Secretary
Sangano reHama dzeKusimbiswa Kunonyangarika mu